Gaaladii oo ka hadashey in salaada laga hortigii lahaa Corona,iyo sida Nabi Mohammed (NNKH) ku sheegey islaamka – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Gaaladii oo ka hadashey in salaada laga hortigii lahaa Corona,iyo sida Nabi...
Gaaladii oo ka hadashey in salaada laga hortigii lahaa Corona,iyo sida Nabi Mohammed (NNKH) ku sheegey islaamka
Qoraalkan oo aan sida uu u qorey website newsweek uga soo turjiney hadii aad ku aragtid wax qalad ah oo ku lid ah diinteeda commentiga nagu soo sheega qoraalkuna wuxu u qornaaa sida tan
Faafida COVID-19 waxay ku qasbeysaa dowladaha iyo ilaha wararka inay bixiyaan talooyinka ugu saxda ah oo waxtar leh dadka ku nool adduunka, maaddaama cudurku runtii yahay mid la gaarsiiyay adduunka oo dhan. Xirfadlayaasha daryeelka caafimaadku waxay aad ugu baahan yihiin, sidoo kale saynisyahano baaraya faafinta iyo saameynta cudurrada faafa.
Khubaradan sida immunologist Dr. Anthony Fauci iyo wariye caafimaad Dr. Sanjay Gupta ayaa sheegaya in nadaafad wanaagsan iyo karantiil, ama dhaqan ka goynta kuwa kale ay rajeynayaan in laga hortago fiditaanka cudurada la kala qaado, waa aaladaha ugu waxtarka badan ee lagu xakameyn karo COVID-19 .
Ma taqaanaa cidda kale ee soo jeedisay nadaafad wanaag iyo karantiin in la sameeyo marka lagu jiro Faafida aafo ku faafta dunida?
waxa ay gaalada ka qortey Nabi mohamed(NNKH) KA YIDHI marka cudurada xuni faafaan
Muhammad, oo ahaa nebigeena Islaamka, 1,300 sano kahor.
In kasta oo aanu ahayn khabiir “dhaqameed” ku saabsan arrimaha cudurrada dilaaga ah, haddana si kastaba ha ahaatee Muxammad wuxuu lahaa talo fiican oo lagaga hortago lana dagaallamo horumarka sida COVID-19.
Muxammad wuxuu yiri: “Haddaad maqashid inuu cudur ku faafay dhul, ha tagin meesha; laakiin haddii belaayadu ku faafto meel aad ku joogto, ha ka tegin meeshaas.”
Wuxuu kaloo yiri: “Kuwa cudurada faafa qabaa waa in ay ka ilaaliyaan kuwa caafimaadka qaba.”
Muxammad wuxuu kaloo aad ugu booriyay aadanaha inay raacaan dhaqamada nadaafadda ee dadka ka ilaaliya infekshinka. Tixgeli xadiisyada soo socda, ama odhaahdii Nebi Muxamed:
“Nadaafaddu waa qeyb ka mid iimaanka.”
Dhaq gacmahaaga markaad tooso kadib; ma ogid halka ay gacmahaagu taabteen intaad hurudday. “
“Barakooyinka cuntada ayaa ku jira gacmaha gacmaha ka hor iyo ka dib cunista maydh gacmahaaga.”
Maxaa dhacaya haddii qof buko? Talo noocee ah ayuu Muxammad siin lahaa dadka kale ee aadanaha ah ee xannuunsan?
Wuxuu dadka ku dhiiri gelin lahaa inay markasta raadsadaan daaweyn caafimaad iyo daawo: “Adeegso daaweyn caafimaad,” ayuu yidhi, “maxaa yeelay Ilaah cudur ma uusan sameynin isaga oo aan u soo saarin daawo, marka laga reebo hal cudur – da ‘.
Malaha waxa ugu muhiimsan, wuxuu gartay goorta la isku dheellitiro iimaanka iyo caqliga. Toddobaadyadii la soo dhaafay, qaarkood ayaa aaday ilaa ay soo jeediyaan in salaadda ay ku fiicnaan laheyd inaad ku joojiso coronavirus-ka halkii aad u hoggaansan lahayd qawaaniinta aasaasiga ah ee fogeynta bulshada iyo karantiilnimada. Sidee Nebi Muxamed ugu jawaabi lahaa fikradda salaadda iyadoo madax yahay ama keliya – daawo?
Tixgeli sheekada soo socota, oo ay nala xiriirto aqoonyahan reer Faaris ah oo qarnigii 9-aad Al-Tirmidhi: Maalin maalmaha ka mid ah, Nebi Muxammad wuxuu arkay nin Baadiyaha ah oo ka tagaya geeltiisii ​​oo aan xiraynin. Wuxuu weydiiyey Baadiyaha, “Maxaad u xirxiraynin awrkaaga?” Baadiyaha ayaa u jawaabay, “Waxaan isku halleeyey Ilaah.” Nebiguna markaas buu yidhi: “Geela awrkaaga marka hore, kadibna isku hallee Ilaah.”
Muxammad wuxuu dadka ku dhiirrigeliyay inay raadiyaan hanuun diintooda, laakiin wuxuu rajaynayay inay qaadaan tallaabooyin taxaddar oo aasaasi ah si loo helo xasilloonida, nabadgeliyada iyo wanaagga dadka oo dhan.
Si kale haddii loo dhigo, wuxuu rajaynayay dadku inay adeegsadaan caqligooda guud.
halkan ka akhriso qoraalka oo english ah Gaalada sida u fahansan diinta suuban inaguna jaahil ayaynu ka nahay ilahow nagu arsaaq diintaada suuban